Bombardier Dash 8 Q400 Multi-livery DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
downloads ရယူရန္ 15 667
virtual cockpit Rikoooo အားဖြင့်တိုးတက်ပရီးမီးယားလိဂ်လေယာဉ်ဒီဇိုင်း Q400 ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ပမော်ဒယ် Rikoooo အားဖြင့်တိုးတက်ဟောင်း DreamWings Q400 ကနေဖြစ်ပါတယ်။ Andrzej Glowacki အားဖြင့် VC ကို texures နှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံအခုမှ။
Rikoooo သီးသန့်! ဤတွင် "အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ" ဟုအဆိုပါ Bombardier Dash 8 Q400 ဇာတိအတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ် FSX ကို virtual cockpit အတူ။ FS400 ဇာတိအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးများအတွက် DreamWings Q2004 created FSX ပုံစံနှင့်ပရီးမီးယားလိဂ်လေယာဉ်ဒီဇိုင်းထံမှ Q400 ၏ကို virtual ယာဉ်နှင့်အတူပေါင်းစည်း။ အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်ကိုအ 8D အခန်းနဲ့ပြည့်စုံ Dash 400 Q3 ပေးသည်။ အတူလိုက်ဖက်တဲ့ Prepar3D v4 နှင့် FSX.
43 နှင့်အတူ repaints ပါဝင်သည်, ထုံးစံ, 2D panel က, FMC Honeywell, လေယာဉ်မှူးအခန်းအသစ် texture သစ်ညဥ့်အချိန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, GPWS, V1 VR V2 မြန်နှုန်း gauge, မြေပြင်ကိုင်တွယ်မှု gauge အသံ။
repaints များစာရင်း: Air ကိုဘာလင်, QantasLink, Sky လုပ်ငန်းခွင်လေကြောင်းလိုင်း, Porter လေကြောင်းလိုင်း, Air ကိုကနေဒါ Express ကို [C-FSRZ] Air ကိုကနေဒါ [C-FSRW] Air ကိုကနေဒါဂျက်ဇ်ဂီတ, flybe "မန်း၏မာနသည်" Westjet Encore, Malev, Tyrolean , airBaltic [YL-BBW] Eurowings [D-ABQC] ရေးအဖွဲ့ Lufthansa [D-ADHC], ပြင်သစ်Sécutitéအရပ်ဘက် [Q-400MR] ဘရပ်ဆဲလ်လေကြောင်းလိုင်း, primer, Alaska လေကြောင်းလိုင်း opb Horizon Air ကို (2019), Alaska လေကြောင်းလိုင်း opb Horizon Air လေကြောင်းလိုင်း retro Livery (2019), က Sky Express, Baboo, JAPANA AIR အသွားအပြန် [JA851C] အဲသယောပိ, Jeju လေတပ်, မာလာဝီလေကြောင်းလိုင်း, တူရကီလေကြောင်းလိုင်းယူနိုက်တက် Express, Horizon လေတပ်, Horizon Air ကိုပြာ, Comfort စိမ်းလန်းတဲ့ Horizon, အိုလံပစ်လေတပ်, အာကာသ Lingus ခရီးသွားလက်မှတ်, air ကိုပြင်သစ်, ဗြိတိန်လေကြောင်းလိုင်း, ခရိုအေးရှားလေကြောင်းလိုင်း, KLM Cityhopper, ဆှစျလေကြောင်းလိုင်းအင်တာနေရှင်နယ်, LAN ကိုလံဘီယာ, All Nippon ကွန်ယက်, စကင်ဒီနေးခရီးသွားလက်မှတ် (SAS), တောင်အာဖရိက Express, သြစတြီးယား Arrows, Flybe စိမ်းလန်း။
Author: Virtual ယာဉ်ပရီးမီးယားလိဂ်လေယာဉ်ဒီဇိုင်း Q400 ထံမှ Rikoooo အားဖြင့်တိုးတက်နေသည်။ ပြင်ပမော်ဒယ် Rikoooo အားဖြင့်တိုးတက်ဟောင်း DreamWings Q400 ကနေဖြစ်ပါတယ်။ Andrzej Glowacki အားဖြင့် VC ကို texures နှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံအခုမှ။
Bombardier ကို Global Express ကို XRS FSX & P3D
Bombardier CRJ-200 အပြည့်အဝ Pack ကို FSX & P3D 1.1